ट्रम्पको भनाइ र यथार्थ - Karobar National Economic Daily
ट्रम्पको भनाइ र यथार्थ
query_builderMarch 3, 2017 11:42 AM supervisor_accountएजेन्सी visibility2988
जहाँ गए पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा एउटै प्रश्न सुनिन्छ : के डोनाल्ड ट्रम्प भारतका लागि सहयोगी होलान् ? के उनी भारतका मित्र हुन् ? ट्रम्प भारतलाई माया गर्छन् त ?
यो प्रश्न गर्नु त कुनै मानिसले तपार्इंको मुखमा एक मुक्का हान्नु र तपार्इंले त्यो मानिस मेरो साथी बन्न चाहन्छ भनेर सोध्नुजस्तै हो । ‘पहिले अमेरिका’ को युगमा ट्रम्पका बारेमा यस्तो प्रश्न गर्नु नै व्यर्थको कुरा हो ।
उनी अमेरिकी व्यवसायले विदेशी व्यवसायलाई कामदार सुम्पेको पटक्कै मन पराउँदैनन् । त्यस्तै विदेशी व्यावसायिक व्यक्तिहरू अमेरिका आएको पनि उनी मन पराउँदैनन् ।
यो तथ्यलाई उनले धेरै किसिमले भनिरहेका छन् । ‘म तिमीलाई मन पराउँदिनँ’ भनेर धेरै पटक भनिसकेपछि ‘उसले भनेको स्पष्ट भएन, सायद उसले मलाई मन पराउँछ कि’ भनेर सोच्नुभन्दा अरू केही होइन ।
किन अमेरिकाले हाम्रा व्यवसायी र हामीलाई मन पराउँदैन भन्ने कुरा बुझ्न अलि गाह्रो छ । जर्ज डब्लु बुसलाई भारतले नायकका रूपमा स्वागत ग-यो ।
बाराक ओबामाले नरेन्द्र मोदीका बारेमा टाइम पत्रिकामा लेखे । प्रोटोकल मिचेर दुई पटकसम्म यी दुईको भेट भयो । त्यसैले भारतीय कम्पनीहरू व्यग्र भए ।
एक जना भारतीय व्यापारीले भने, उनले हिन्दूलाई माया गर्छन्, तर उनले हिन्दूलाई नाश गर्ने कानुन पास गर्न सक्छन् । त्यसैले भारतीय व्यापारीको सोच गलत छ ।
तथ्य के हो भने वर्षौंदेखि उनी जे भनिरहेका छन्, उनी त्यही गर्छन् । यसको सन्देश हो ः अमेरिकी रोजगारी अमेरिकाबाट बाहिरिइरहेको छ ।
विदेशमा जन्मिएकाहरूले अमेरिकीको जागिर खोसिरहेका छन् । उनी यसलाई रोक्न चाहन्छन् । यो रोक्नका लागि उनी जस्तोसुकै कानुन पनि बनाउन सक्छन्, निर्देशन दिन सक्छन् वा अन्य काम गर्न सक्छन् ।
तैपनि केही मानिस अझै प्रश्न गर्छन् : उनले विदेशी रोजगार भनेको के हो ? रोजगारीले अमेरिका छाड्नु हुन्न भन्ने उनको भनाइको आशय के हो ? हरेकभित्र भारत पर्दैन भन्ने केहीको सोच अझै छ । आउटसोर्सिङ सही हो ।
एच–१बी सही छ । उनी भारतका मित्र हुन् । त्यसैले उनको नीतिभित्र भारत पर्दैन । तर, यी भनाइ गलत हुन् । उनको आशय भारत पनि हो ।
उनको आर्थिक नीतिभित्र हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुको कुनै अर्थ छैन । भारतलाई बेग्लै नियम र अरूलाई बेग्लै नियम भन्ने हुँदैन ।
ओस्कर वायल्डले भनेका छन्, कुनै विषयमा कुरा गर्नुभन्दा कुरा नगरिएको विषयचाहिँ अझ खराब हुन्छ । ट्रम्प भारतलाई न माया गर्छन् न घृणा । उनको एउटै काम हो— अमेरिकी रोजगारी । हैदरावाद र बैंगलोर नष्ट होस् वा जेसुकै होस्, उनलाई मतलब छैन ।
भारतीय व्यवसाय अविश्वसनीय रूपमा लचिलो छ । उनीहरू भारतीय कर्मचारीतन्त्र, नगदको अभाव हुँदा पनि जीवित रहन्छन् भने ट्रम्पले जस्तो नीति लिए पनि उनीहरू जीवित रहन सक्छन् ।
उनीहरू डेमोक्रेटहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् अथवा आफ्ना ग्राहक अन्य देशमा खोज्न सक्छन् । उनीहरू सहीसलामत नै रहनेछन्, तर अमेरिका भारतलाई माया गर्छ भन्ने भ्रममा उनीहरू छन् ।
चीनलाई यसको आवश्यकता छैन । उनीहरू यति धेरै डलर चीन भित्र्याउँछन् कि त्यसले अमेरिकाको माया किन्छ । उनीहरूले सोधेका छन्— “यो मित्रताको लागत कति हो ?” चीनले जति धेरै हामीले व्यापार गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले हामीले भन्नुपरिरहेको छ-“हाम्रो साथी बन्नुहोस् ।”
स्टालिनले भनेका थिए : “म सम्भवतः धेरै मेरा विरोधीहरूलाई मार्न गइरहेको छु ।” यो सुनेर सुरुमा उनीहरू “हो हो, ठिकै हो” भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् र केही बेरपछि मत जित्नका लागि यसो भनिएको हो भन्छन् । तर, उनीहरूले जतिबेला वास्तविकता थाहा पाउँछन्, निकै ढिला भइसकेको हुनेछ ।
अनुभव पाल, इ इकोनोमिस्ट